China kusimudzira vanokodzera here & yokufaranuka indasitiri - China Tianjin Shengxin Sports Goods
China kusimudzira vanokodzera here & yokufaranuka indasitiri
The State Council rakapa zano kutanga vanokodzera here uye yokufaranuka maindasitiri, kuisa chinangwa kuwedzera goho ari nemauto kuti vanopfuura 3 tiririyoni Currencykuva ($ 442.5 billion) ne 2025.
Panguva iyoyo, imwe mararamiro utano vachaparadzwa akasikwa, vanonzwisisa indasitiri mamiriro, dzakapfuma kugoverwa vanokodzera here zvinhu uye zvivako, wakakwidzwa kudiwa kuti zvinodyiwa uye yakakwirira basa anokwanisa, maererano yorugwaro akabudiswa musi Oct 28.
It akadana kuvandudza gym yokufaranuka uye basa gadziriro munyika nokugadzira daily mukusimbisa muviri mabasa, mitambo inotambirwa kunze, uye mitambo kwetsika maitiro, kusimudzira zvemitambo tourism, uye kusanganisa Internet Plus pamwe bhizimisi kukura.
Daily kugwinya mitambo, yakadai bhora, basketball, nevolleyball, ping-pong, tenesi uye kumhanya, zvinofanira mberi kusimudzirwa uye aisimbisa, akati gwaro. Imwe kukura panze uye fashoni mitambo anofanirawo speeded kumusoro, kusanganisira chando, kukwira makomo, mvura mitambo, injini zvemitambo, Equestrian uye gorofu. The zvemitambo kwetsika maitiro, kufanana kung fu, shato chikepe uye shumba nokutamba, zvinosanganisirwawo urongwa.
The Urongwa akakurudzirawo kutanga zvemitambo ushanyi uye kutsigira indasitiri kukura pamwe ruzivo, akadai internet, Big Data uye gore kadambari.
Kana toreva nokukudziridza pamusika vatambi vari indasitiri anonetseka, zano akati gym yokufaranuka uye makambani nemasangano evanhu vanofanira kukurudzirwa chokuwedzera mabhizimisi, uye dzimwe mhando Chinese pezvitsiga vanokurudzirwa kutsvaka rubatsiro kubva kumusika guta - zvakadai sokuridza IPO uye akadzika zvisungo - kuitira kuvandudza makwikwi dzavo dzakawanda uye vave makambani nyika-kirasi.
It anodana zviremera zvemo akamumutsira mazai chenguva duku platforms kutsigira startups vakaomerera kugwinya uye mafaro, kunyanya avo raparurwa nesangano pamudyandigere vatambi. Uyezve, masangano nongovernment mitambo vanokurudzirwawo kuti vawedzere basa ravo uye kutsiva, kusvika pamwero wakati, voruzhinji yemitambo mabasa inopiwa nehurumende.
Kunze kutsigira mitambo kuroorwa uye boka, gwaro zvinodawo kuti optimized indasitiri mamiriro. Huwandu basa kwemauto ari indasitiri anokurudzirwa kuti vachamutswa. Mukusarudza kugwinya netsvimbo, mabasa, nezvigadziko maindasitiri uye zvirongwa zvinofanira kuvakwa kuisa mienzaniso nokuda indasitiri kukura.
Regions pamwe nemamwe zviwanikwa, kusanganisira dondo, mvura, Wetland, makomo uye mumarenje, vanokurudzirwa kuva mitambo chaizvo kuti anoenderana nemashoko yomunharaunda ezvinhu, kuti kusika pachavo muchiso kwavo.
Gwaro akadana kuvaka gym yokufaranuka uye zvivako nokushandisa mumadhorobha dzine kusanganisira parklands, shama dzezvimwe, kuvaka edzimba uye mudzimba - nokusika kugwinya dzezvimwe mukati maminitsi 15 'kure.
Uyezve, akakurudzira utilizing nhandare pfuma huripo, kuwedzera emakambani nemasangano kuzarura zvivako zvemitambo dzavo kuruzhinji, uye kukurudzira zvivako zvikoro 'kuramba akavhurika pashure mukirasi uye mazororo.
Wandei chinokosha kugwinya uye kuzvivaraidza zvivako zvakadai gomo uye makomba mumisasa, kuzvivaraidza motokari misasa, uye musango uye Kuda basa dzemapurisa vanofanira kuva zvakavakwa, gwaro racho akati.
Kugonesa zvokutsvakurudza, budiriro uye kugadzira kukwanisa kugwinya uye kuzvivaraidza midziyo, hurumende yakakurudzira emakambani, kwesayenzi masangano, uye masangano evanhu kuti aumbe muchinjikwa-indasitiri nokubatana, uye rutsigiro gym midziyo kugadzira emakambani kuti riwedzere bhizimisi ravo pabasa sectors, kuitisa mhiri kwemakungwa akazobatanidzwa uye acquisitions, vadyi akaidza, uye vadyi kukura.
Gwaro akaronga kutsigira emakambani ari kusimukira yakadekara midziyo nokuda zvakasiyana-siyana zvinodiwa dzemazera akasiyana-siyana, uyewo tsvakurudzo midziyo pamwe kwekumaodzanyemba michina yakadai wearable michina zvemitambo uye rakapotsa midziyo chokwadi zvemitambo.
Panguva iyoyowo, akarondedzera policies zvinofanira kunatsiridzwa kuti dzipe kurerukirwa uye kudzivirira mapoka kugwinya zvakasiyana, popularize ruzivo esayenzi vanokodzera here, kukwezva munzanga mari mari iri yemitambo indasitiri, simbisa gym utariri tarenda, uyewo kumisa basa zvinodiwa uye unhu mureza muna kugwinya uye kuzvivaraidza kwemauto tichitarisa basa, unyanzvi kudzidzisa, basa zvakanaka, kwezvivako kuvaka, uye midziyo mukugadzira.
Post nguva: Jul-26-2018